I-Moto Z2 Play isemthethweni kwaye yongeza iiMotoMods | Iindaba zeGajethi
I-Moto Z2 Play isemthethweni kwaye yongeza iiMotoMods
Xa sithetha ngeMotorola, uthotho lweMoto G kunye nempumelelo yayo ithi qatha engqondweni, kodwa ukongeza kolu luhlu lweemveliso zokungena, ezinye izixhobo zeMotorola eziqhubeka nokuba yimpumelelo ngaphandle kokuba zibiza kakhulu kufanele kuqatshelwe. Ityala leMoto Z Dlala ngokungathandabuzekiyo yimodeli ethengise kakhulu emva kweMoto G ekhankanyiweyo, inyani kukuba ngeli xesha sele sinemodeli entsha enefani Z Dlala kwaye yintoni eyongeza kwiMotoMods?.
Into esinokuyqaqambisa kuyo xa sijonga kuqala kukuba isixhobo sinoyilo oluthile oluhlaziyiweyo ngokuthelekiswa nemodeli yangaphambili, icekeceke ngandlela ithile, hayi kakhulu ukuze ingachaphazeli ukusebenza kwayo, kodwa ukuba siphulukana namandla ebhetri aseleyo kwi-3000 mAh (3510 mAh imodeli yangaphambili) ngenxa ye- obucekeceke obongezelelekileyo obongezwa kule Moto Z2 Play. Ukongeza ekubeni mncinci kancinci kwaye unebhetri encinci kunenguqulo yangaphambili, i-smartphone ngokufanayo iyafana neyandulelayo yoyilo lwe-unibody kunye ne-sensor yeminwe ngaphambili, ikongeza i-5,5-intshi Super AMOLED isikrini kunye neQualcomm Iprosesa ye-Snapdragon 626 2,2 GHz kunye ne-Adreno 506 GPU.
Zonke ezinye iinkcukacha ezibalaseleyo ngokucacileyo ziyimilinganiselo ye-thinnest kunye nobunzima obuphantsi: 5,99 mm ubukhulu 145 g, I-4 GB ye-RAM, i-64 GB yokugcina yangaphakathi enokwandiswa nge-microsSD kunye neekhamera zezixhobo. Kule meko sineyona sensor iphambili ye-12 megapixels Itekhnoloji ye-Dual Pixel kunye nekhamera engaphambili ene-5 mp kunye f / 2.0 ukuvula.
Ezi MotoMods sele zikhona kwimodeli yangoku kodwa kule meko sijamelene notshintsho lwenguqulo entsha yesixhobo, esongeza kwimeko yesithethi ingxelo yesibini yeJBL eyayidume kakhulu kwisizukulwana sokuqala. Nazi iiMotoMods ezintsha:
Isithethi seJBL SoundBost 2
Ityala lokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ngamafutshane, isixhobo esibhengezwe ngokusesikweni eBrazil ngexabiso leedola ezingama-499 eUnited States, ke Singacinga ukuba ixabiso liya kuhlala kwi-499 euro xa ifikelela kulo lonke elaseYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Moto Z2 Play isemthethweni kwaye yongeza iiMotoMods
Iiglasi zeSnapchat, iMiboniso ngoku iyafumaneka ukuthengwa eSpain
I-OnePlus 5 iya kuziswa ngoJuni 15